Horudhac: Southampton vs Manchester City… (Waa sidee rikoorka la yaabka leh ee ay Saints ka heysato kulammada ay wajahdo kooxaha difaacanaya Premier League?) – Gool FM
Ahmed Nur January 22, 2022
(Southampton) 22 Jan 2022. Naadiga Manchester City ayaa ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League la ciyaareysa naadiga Southampton oo ay maanta marti u tahay, waxayna hoggaamiyeyaasha horyaalka doonayaan inay sii dheereystaan dhibcaha hoggaanka si ugu sii dhowaadaan inay difaacdaan EPL-ka.
Saints oo ku jirta kaalinta 12-aad ee kala sarreynta horyaalka iyadoo heysata 24 dhibcood ayaa la ciyaareysa Man City oo hoggaanka ku heysa 56 dhibcood.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 08:30 Fiidnimo xilliga Geeska Afrika.
Garoonka: St. Mary’s Stadium
Garsooraha: Simon Hooper (England)
Southampton xiddigaheeda Tino Livramento, Alex McCarthy iyo Will Smallbone ayaa dhaawacyo ku maqnaan doona halka Moussa Djenepo uu ku maqan yahay koobka qarammada qaaradda Afrika balse Mohamed Elyounoussi iyo Theo Walcott ayaa soo laabanaya ciyaartan kaddib markii ay kasoo kabsadeen Koofid-19.
Dhinaca kale Manchester City ayaa asbuuc fasax ah siisay Riyad Mahrez kaddib markii xulkiisa Algeria laga reebay tartanka AFCON 2021 ee ka socda Cameroon balse Nathan Ake ayaa diyaar ah kulankan, inkastoo Oleksandr Zinchenko la xaqiijiyay inuu seegayo ciyaarta caawa.
Manchester City ayaa guuleysatay siddeed ka mid ah 10-kii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka oo ay la ciyaartay Southampton.
Southampton ayaa heshay barbarro 0-0 kulankii hore ee xilli ciyaareedkan labada naadi dhex maray balse guuldarro kama aysan badbaadin labada lug ee horyaalka is-araggan tan iyo xilli ciyaareedkii 2002-03.
Saints ayaa 10 guul garoonkeeda kaga gaartay kooxaha difaacanaya Premier League, waxaana dhankan kaga wanaagsan kaliya Liverpool oo 14 guul kooxaha horyaalka difaacanaya garoonkeeda kaga gaartay.
Man City ayaa sameysay 13 shabaq difaacasho xilli ciyaareedkan waana kooxda ugu sarreysa dhinacaan, waxaana xusid mudan in kaliya labo gool laga dhaliyay qaybta hore ee ciyaarta halka guud ahaan 13 gool laga dhaliyay.
Horudhac: Manchester United vs West Ham United... (Aqriso rikoorrada iyo xaqiiqooyinka aad uga baahan tahay ciyaartan)